बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, तपाईलाई पर्‍यो त ? | आर्थिक अभियान
बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, तपाईलाई पर्‍यो त ?
असार ३, काठमाडौं । बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज (शुक्रवार) बाँडफाँट भएको छ ।
विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले आफ्नै कार्यालय नक्सालमा आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । गोलाप्रथाद्वारा १ लाख ३६ हजार ५०० जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका छन् । यस आईपीओमा कुल १७ लाख ९१ हजार ८९५ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये २ हजार ८४ जनाको आवेदन रद्ध भएको थियो ।
कम्पनीले जेठ २० गतेदेखि जेठ २५ गतेसम्म प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका १५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
कुल कित्ता शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँट गरी बाँकी १३ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर भने कम्पनीले सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको हो ।
लगानीकर्ताले विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलको वेबसाइट र मेरो शेयरबाट आईपीओको रिजल्ट हेर्न सक्नेछन् ।
साथै सिडीएस क्लियरिङको वेबसाइट https://iporesult.cdsc.com.np/ बाट पनि हेर्न सक्नेछन् । नतिजा हेर्नको लागि केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।